सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस
धरानमा सोनी घटनाले अर्को मोड लिएको छ । माइती पक्षले आफ्नो छोरी चेलीको ह त्या भएको दावी गर्दै जा हेरी पनि दीईसकेको छ । त्यसपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागी सोनी हाङ्माको ससुरा, देवर, दुई आमाजू दीदीलाई पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ । तर सोनीको श्रीमान युनिक लिम्बुले भने अर्कै दावी गर्दै मिडियामा आएका छन् । घटना सार्बजनिक भएसंगै उनले खुल्ला पत्र लेखेर समेत आफ्नो विचार राखी सकेका थिए । अहिले भने उनि मिडियाको टेलिफोन सम्पर्क मै आएर आफ्नो भनाई राखेका छन ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उनीहरुले गत असार महिनामा मात्र विवाह गरेका थिए । विवाह पछि सिंगापुरे लाहुरे युनिक आफ्नो ड्युटी गर्न सिंगापुर गएका थिए । तर जब उनि सिंगापुर पुगे त्यसपछि आफ्नो श्रीमतीको विगत बारे थाहा पाएपछि उनि छाँगाबाट खसेको युनिक बताउछन । उनले आफुले धोका पाएको दावी गर्छन । श्रीमान युनिकले सोनी हाङ्माले आ त्म त्या गर्नुको मुख्य दोषी भने कोरियामा भएको पुर्वप्रेमी भएको दावी गर्छन ।
श्रीमान युनिक लिम्बुले लगाएको आरोप सबै असत्य भन्दै डीकेनले यदि आफ्नो गल्ति प्रमाणित भए कानुन अनुसार सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताए । डीकेनसंग गरिएको पुरा कुराकानी हेर्नुहोस । ** भिडियो हेर्न क्लिक गर्नुहोला **